Wararka Maanta: Khamiis, Apr 29, 2021-Weriye Maxamed Cumar Yuusuf (Bolton) oo muddo ka badan toban cishe u xiran ciidanka Danab ee Galmudug
Weriyahan ayaa ilo xog ogaal waxay HOL, u sheegeen in xilli saq dhexe ay gurigiisa kala baxeen ciidamo katirsan kuwa Danab. Lamana garanayo illaa iyo hadda sababta loo xiray weriyaha.
Xog aan helayno waxay sheegaysaa in weriyaha iyo dad kaloo badan lagu xiray howlgal ciidan oo ka dhacay xaafado katirsan koonfurta magaalada Gaalkacyo, iyadoo howlgalkaas lagu baadi goobayay dad la xiriirinayo in Alshabaab xiriir la leeyihiin.
Maalmo kadib, laamaha amnigu waxay sii daayeen qaar kamid ah dadkii howlgalka lagu xiray oo dad shacab ah u badnaa, balse weriyaha kuma jirin dadka xoriyadooda loosoo celiyay.
Saxafiyiinta ka howlgala magaalada Gaalkacyo dhinaceeda koonfureed ayaa laamaha amniga ugu baaqay in weriyahan lasii daayo ama maxkamad la horkeeno haddii dambi lagu haysto.